Home Wararka Sarkaal ka tirsanaa ciidanka Puntland oo lagu dilay magaladda Boosaaso
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in saaka halkaas lagu dilay taliye hore oo Ciidamada Puntland.
Taliyihii hore ee Kaantaroolka Boosaaso, Barkhad Guduudane Buryar ayaa hubeysan oo aan haybtooda weli la aqoonsan ay ku dishay bartamaha magaalada Boosaaso.
Saraakiisha Laamaha Amniga ayaa warbaahinta u sheegay in aysan jirin weli cid loo qabtay dilkaas balse ay wadaan hawlgal baaritaan ah.
Previous articleHirshabeelle oo shaacisay xilliga la dooranayo xildhibaannadii ugu horeeyay
Next articleKursigii lakala badashay oo maanta la siiyay Wasiir katirsan Koonfur Galbeed
Faah-faahin: qarax ka dhacay Muqdisho!!
Wasiirka Warfaafinta iyo Kan warshadaha oo la magacaabay